बुबा गुमाएको भोलिपल्टै आदर्शको भावुक भिडियो – ‘मेरो बुवाले चलाएको स्कुल हेर, अनि तिम्ले चलाएको देश, लाज लाग्दैन !’ हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
May 26, 2021 AdminLeaveaComment on बुबा गुमाएको भोलिपल्टै आदर्शको भावुक भिडियो – ‘मेरो बुवाले चलाएको स्कुल हेर, अनि तिम्ले चलाएको देश, लाज लाग्दैन !’ हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
चर्चित स्ट्याण्ड–अप कमेडियन आदर्श मिश्राको निक्कै भावुक भिडियो यति बेला सामाजिक संजालमा भाइरल भैरहेको छ । उपचार अभावमा आफ्नो बुबाको मृ’त्यु भएपछि उनले भावुक हुदै एक भिडियो सार्बजनिक गरेका छन । बुबाको मृगौला ख’राब भएको कारण उनले डा’इलासिस गर्दै आएका थिए । तर स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको स’मस्याका कारण कोरोना महामारीको बीच समय मै डाइलासिस हुन सकेन ।
समय मै डाइलासिस हुन नपाएपछी आदर्श ले आफ्नो बुबालाई गुमाउनु पर्यो । वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज (एनएमसी) ले गुणस्तरीय डायलासिस सुविधा नदिँदा धेरै बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको आदर्शको आ’रोप छ । आफ्नो बुवा विनोद मिश्रा इमानदार र मेहनती व्यक्तिका भएको आदर्श बताउछन ।
अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि बुबाले आफू प्रिन्सिपलको रुपमा रहेको विद्यालयको मुहार नै फेरिदिएको बताए । स्वास्थ्य प्रणाली खराब भएकै कारण आफ्नो बुबाको मृत्यु भएको ठहर गर्दै सरकार प्रति पनि आदर्शको आक्रोस छ । उनले देशको प्रधानमन्त्री प्रति पनि दुखेसो पोखेका छन । आदर्श भन्छन – ‘‘डायलाइसिसका लागि स्कुटरको पछाडि बसेर हप्ताको दुईपटक मेरो बुबा अस्पताल गएका हुन्, केपी ओली होइन ।
मेरो बाउले चलाको स्कुल हेर र तिम्ले चलाको देश हेर । अनि ला’ज लाग्दै भने मलाई भन । काम गर्न दिएनन् भन्छौ ? काम गर्न मन कहाँ छ तिम्लाई ? लाज लाग्दैन ?’ पछिल्लो राजनीतिक घ’टनाक्रम हेरेर अनि आदर्शको आ’क्रोस सरकार प्रति रहेको थियो । बुबा गुमाउदाको दुखमा पनि मुस्कुराउदै आदर्शले आफ्नो पिडा यसरी बताउछन :
आजको राशिफल हेर्नुहोस्ः मिति २०७८ साल भदौ १ गते मंगलबार तदनानुसार सन् २०२१ अगष्ट १७ तारिख…..